DF Somalia oo bilowday inay jidadka ku qaybiso agab lagaga gaashaanto Civid-19 + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DF Somalia oo bilowday inay jidadka ku qaybiso agab lagaga gaashaanto Civid-19...
DF Somalia oo bilowday inay jidadka ku qaybiso agab lagaga gaashaanto Civid-19 + Sawirro
(Muqdisho) 26 Abriil 2020 – DF Somalia ayaa maanta Muqdisho ka bilowday qaybinta maasgarayaal lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19.
Qaybinta maasgarahan oo qorshuhu yahay in la gaarsiiyo dhammaan dadka Sooaamliyeed ayaa jidadka magaalada loogu qaybiyey darawallada Bajaajta, gaadiidka dadweynaha iyo qeybo kale oo kamid ah dadweynaha magaalada Muqdisho.
Qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay qorshaha bulshada loogu geybinayo maaskaraha iyo dadaallada kale ee dowladdu ku xakameyneyso faafitaanka iyo saameynta kale ee bulshada uu ku yeelanayo COVID-19.
Dowladda Somalia oo la hardameysa xakameynta faafitaanka cudurka ayaa horay u qaaday tillaabooyin lagu yareynayo saameynta uu COVID-19 ku yeelanayo bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleImaaraadka oo doonaya inuu kala gooyo dalka Yaman (Maamul uu ka dhisay koonfurta Yaman)
Next article”Maraykanku waa noo ogol yahay!” – Israel oo sidii cad hilib ah oo xeero ku jira uga hadlaysa qaadashada Daanta Galbeed ee Falastiin